အသက်တစ်ချက်နဲ့ တစ်ချက် ရှူရှိုက်ခြင်းအမှုမှာ တူညီမှုတွေနဲ့အတူ ကွဲပြားမှုတွေကို ခံစားသိတတ်လာသလို။ မရေရာမှုတွေထဲမှာ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေကို ကျောက်တူးသမားလို၊ ရေမဆေးရှာနေသူလို၊ မနက်ဖြန်မှာ ဒီနာရီပိုင်းအတွင်းမှာ ဒီစက္ကန့်အပိုင်းအခြားမှာ ငါဟာ ငါမ ဟုတ်တဲ့ ငါတစ်ယောက် သို့မဟုတ် ငါတစ်ကောင် သို့မဟုတ် ငါတစ်ဦး ဖြစ်နေနိုင်တာဘဲလေ။ ဒီလို အချိုးအဆစ်တွေမှာ လမ်းကွေ့တွေက ကြက်ခြေခတ်ထားတဲ့ ဒါမှမဟုတ်ရင် အနှုတ်ပြထားတဲ့ မကွေ့ရ၊ ပြောင်းပြန်မသွားရ လမ်းတွေလို သတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာ သွားရမယ့် လမ်းတွေက သံဆူးခတ်ထားတဲ့ အတားအဆီးတွေနဲ့။ အသက်ရှူလိုက်ရင်ဘဲ ပေါက်ထွက်တော့မယ့် အဆုတ်တစ်လုံးဟာ ထွက်ပေါက်အဖြစ်နဲ့ ပေါက်ကွဲခြင်းကိုဘဲ ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေခဲ့ပြန်ပြီလေ။
‘သင်သွားလိုရာ သွားနိုင်ပြီ’ ဆိုတဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းပေးခံလိုက်ရတဲ့ ဘဝတစ်ခုလို လွတ်လပ်ခြင်းမရှိတဲ့ဘဝထဲမှာ ဘဝတစ်ခုလုံး လောင်မြိုက်လိုက်ကြရပုံ၊ အရောင်အဆင်းဝေဝါးမှုနဲ့ သက်ငြိမ် ပန်းချီကားတစ်ချက်ထဲက တည်ကြည်တဲ့၊ သဘောပေါက်နေတဲ့ ဟန်ပန်တွေကို ဖော်ကျူးထားပုံ၊ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု တူညီနေသယောင် ထင်မှတ်ရလောက်အောင် လက်ရာမြောက် အက္ခရာတွေကို ဥပမာ တစ်ခုအဖြစ် အသက်သွင်းနေပုံ၊ ငိုယိုမြည်တမ်းနေတဲ့ ဆာလောင်နေသူရဲ့ တိုးလျှိုးတောင်းပန်နေတဲ့ဟန်ကို ဇာတ်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့ အဖွင့်တေးတစ်ပုဒ်အဖြစ် တင်ဆက်နေတဲ့ပုံ၊ ဒီလိုယစ်မူးစေတဲ့ပုံတွေကို ခံစားတတ်တဲ့ နှလုံးသားတွေနဲ့ ရင်ဘတ်တစ်ခုချင်းဆီကို ဖြန့်ကျက်ပေးလိုက်ပေါ့ NEO …. ။
ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့တစ်ခု အပြိုင်မောင်းကြတဲ့ နယ်စည်းမခြား ယှဉ်ပြိုင်ပွဲတွေကို ရင်ခုန်ယစ်မူးနေတဲ့ပုံ၊ စာသားမပါ ရုပ်မပါ တိမ်လို လေလို ရေလို မြေလို အမြင်မတူမှုတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ပုံ၊ မေတ္တာတရားကို ရှေ့ထားပြီး ဒေါနဲ့ မောနဲ့ စကားလုံးတွေကို ရှေ့ပြေးကြိုတင်စေလွှတ်လိုက် ရပုံ၊ ဒီလို ပုံတွေ ကားတွေထဲမှာ ဘောင်ခတ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုလိုက်ရပုံ၊ အင်အားတွေကို အားကြိုးမာန်တက် ညှစ်ထုတ်လိုက်ရပုံ၊ မောပန်းနွမ်းလျ ခြေပစ်လက်ပစ် အနားယူပစ်လိုက်ရပုံ၊ ဘဝတွေထဲမှာ သဘာဝပုံတွေကို စုတ်တံတစ်ချောင်းနဲ့ ငါရေးဆွဲတတ်ချင်ပုံ၊ ဒီလို အကြောင်းတရား တွေကို တွေးတောဟန်ပြုနေပုံ၊ ငါဟာ ငါတစ်ကောင် ငါတစ်ယောက် ငါတစ်ဦး ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ချဲလင်းသည် ချဲလင်းသာဖြစ်ပါစေ…..။
ခုခံအားကျဆင်းမှုတွေထဲမှာ HIV က ရှေ့မှာ မိန့်မိန့်ကြီးရပ်လို့ ၊ ဦးဏှောက် အတွေးတွေထဲမှာ ဗိုင်းရပ်စ် အကောင် သန်းပေါင်း များစွာ ခုံခံအားစုပ်ယူနေကြပုံကဦးဆောင်လို့ ဝေခွဲမရပါလား….. လောကကြီးထဲမှာ ငါမမြင်လိုတဲ့ ငါမကြားလိုတဲ့ ငါမသိလိုတဲ့ ပုံတွေထဲမှာ ဆေးသားလှလှလေးတွေက နေသားတကျ ဖြစ်နေရဦးမလား NEO ။ နိုင်ငံကြီးသားပီသအောင် နိုင်င့ံမြေပုံကို ပုံကြီးချဲ့ပြီး နံရံပေါ် ဆွဲချိတ်လိုက်ချင်တယ်။ အမျိုးကောင်းသားပီသအောင် အကောင်းတွေကိုဘဲ အမျိုးအဖြစ် ရွေးချယ် သောက်ပစ်လိုက်ချင်တယ်။
အမုန်းတချို့ကို နဲနဲဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လျော့ချပစ်လိုက်ရင်ဘဲ ထုတ်ချင်းဖောက်မယ့် အချစ်တွေကို ပစ်မှတ်တည့်တည့်ကြီး ခုန်အုပ်လိုက်မှာ ပါ ။ အစွဲတွေနဲနဲဘဲဖြစ်ြဖစ် မထားတော့ရင် နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ စကားလုံးတွေကို နားတွေထဲ တရစပ်ခုတ်မောင်းဝင်ပစ်လိုက်ကြမှာ။ လေယာဉ်တစ် စင်းထွက်ခွာဖို့ ပြေးလမ်းတွေကို ရှည်ထွက်လာခိုင်းခဲ့ရသလို လေယာဉ်တစ်စင်း ခုန်ဆင်းလာဖို့ ပြေးလမ်းတွေကို ရှင်းလင်းပေးခဲ့ရင်ဘဲ ……. ဒီလိုမျိုးတွေကို ယစ်မူးနေခဲ့ပြန်ပြီလား NEO…။
အသုံးမကျတဲ့ အသုံးမပြုတဲ့ အိုဟောင်းနွမ်းညစ်နေတဲ့ အတွေးထဲမှာ ပျော်လို့ ပြုံးလို့ ၊ မသုံးရသေးတဲ့ အဟောင်းထဲမှာ သတ်မှတ်ချက်ကို မေ့ပစ်လိုက်ချင်တာပေါ့ NEO ရယ်…။ ငါဟာ ကြိုသူမဲ့တဲ့ အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာ အဟောင်းကို အသစ်အဖြစ် အသစ်ကို အဟောင်းအဖြစ် လန်းလန်းဆန်းဆန်း ခြေတက်ပြီး နေမဝင်ခင် အိမ်ပြန်ရောက်ချင်ခဲ့တာ ။ ဒီလို အနေအထားမျိုးကို ရင်ဘတ်နားက အိတ်ကပ်ထဲမှာ ထိုးထည့် အချစ်တွေကို မျိုးပွားပစ်လိုက်ပေါ့လေ … မျက်လုံးဖွင့်လိုက်ရင်ဘဲ အလင်းတန်းနဲ့အတူ ဝင်လာခဲ့ပေါ့ NEO…..။